Ụta | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Ọtụtụ nhọrọ dị mfe maka owuwu nke ndị na-enye nri na PVC
Ndị na-azụ anụ ọkụkọ omenala na-adịghị arụ ọrụ ma bụrụ ndị na-adịghị mma, n'ihi na ụmụ nnụnụ na-arịba n'ime ha ugboro ugboro, na-ekesa ihe oriri, na-ekpuchi ma na-emegharị efere. Ndị na-azụ anụ ọkụkọ na-eleba anya mgbe nile maka ọnọdụ nke ndị na-azụ nri ma na-etinye oge dị ukwuu iji dozie ha.
Ọfọn achọ. Kwesịrị ekwesị na nlekọta
A kpochara yabasị (Allium) a na-achọ mma, ọ dị nso, ya bụ, onye ikwu garlic na eyịm, bụ nke a na-azụlite. N'ụwa, e nwere ihe dị ka 600 ụdị eyịm achọ. A na-eri yabasị, a na-enwekwa mmasị okooko osisi ya. Ndị a bụ okooko osisi ndị na-enweghị atụ na oge ntoju.
Na-akpata yellowing eyịm ye mwepụ ha
Chee echiche na-enweghị nri na-enweghị eyịm bụ ihe agaghị ekwe omume. A na-eji ingredient a bara uru n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ efere niile: nke mbụ, nke abụọ, mmiri, na canning, ọbụna na-acha ọbara ọbara marmalade dị njikere. Osisi yellowing na-akpata pests Ọ ga-adị ka ọ dịghị ihe dị mfe karịa na-eto eto eyịm - ndị a abụghị capricious tomato ma ọ bụ dị nro esenidụt eggplants.
Esi na-eto eto erimeri green na windowsill
Ọ ga-adị, gịnị kpatara anyị ji eto eto eyịm n'ụlọ, ma ọ bụrụ na ọ dị na ụlọ ahịa ọ bụla, ọbụna n'oge oyi ị nwere ike ịzụta ọtụtụ elu? Ma n'eziokwu, n'ime ihe mmụta a ọtụtụ uru. Mkpụrụ elu nke ebe obibi bụ isi iyi nke vitamin na nri, ọ na-achọ ihe oriri ahụ n'ụzọ dị ịtụnanya, na-adị ọhụrụ ma dị nso, ọ na-efu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'efu.
Ụgba ụta: mejupụtara, ojiji, uru bara uru na contraindications
Onion isiokwu nwere uto magburu onwe ya bara uru maka ahụ mmadụ. Na mba anyị, a na-eto eto a ma jiri ya mee ihe ọ bụghị nanị na nri, kamakwa na nkà mmụta ọgwụ. N'isiokwu a, anyị ga-eleba anya na ihe a na-agba ụta na ngwa ya. Onions-subject: ọdịnaya calorie, ngwugwu na ihe oriri na-edozi ahụ nke Tatarka, ájá ájá, odorless garlic, fistula - a na-akpọ aha ndị a nile eyịm-isiokwu.
Ojiji nke erimeri erimeri: bara uru ihe onwunwe na contraindications
Kedu ihe nwere ike ichota efere a maara nke ọma, nye ya ọmarịcha anya ma gbakwunye ọkụ ọkụ karịa nku a na-acha acha akwụkwọ ndụ? N'ihi ihe kachasị mfe nke nsị (na mba, na griin haus, n'ụlọ na windowsill), ngwaahịa a nwere ike iwesa ọhụụ n'afọ, ọbụlagodi mgbe ndị ọzọ na-enweta vitamin adịghị ngwa ngwa.
Nkọwa nke ụfọdụ ụdị yabasị
Onye na-adịghị amasị ịmepụta onwe gị na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ eyịm na tebụl iri nri. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị zụlitere onwe gị. N'isiokwu a, anyị ga-atụle ihe dị iche iche nke yabasị-isiokwu, ma ọ bụ karịa, na ụdị ya kacha mma. Okpokoro-isiokwu dị iche na bọlbụ nkịtị dị elu nke akwụkwọ ya na-enweghị atụ na enweghị eyịm. A na-emepụta eyịm dị otú ahụ nanị maka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Shallots: calories, ojiji, uru bara uru na contraindications
Ọtụtụ ndị na-ahụ n'anya na-ama jijiji n'ihi ntakịrị uto dị nro, nke dị nro na nke dịtụ ụtọ, nke na-anaghị eme ka ísì ọjọọ riechaa. Tụkwasị na nke ahụ, elu ya na eyịm anaghị eme ka anya mmiri sliced, dị iche na eyịm ndị ọzọ. Kedu ihe bụ shallot So, shallot, gịnị ka ọ bụ? Shallot bụ osisi osisi nke ezinụlọ yabasị, nke a na-achịkọta yabasị ya n'ụlọnga, nke mere ka ọ dị ka galik.
Esi echekwa eyịm n'oge oyi
Eyịm bụ otu n'ime ihe ọkụkụ kachasị ewu ewu na-eto eto n'ugbo, n'agbanyeghị mpaghara mpaghara ihu igwe ma ọ bụ mmiri ozuzo. Mgbe ha nwetasịrị nsogbu ahụ na-esite na nchekwa nke eyịm. N'ịgide nsogbu nke ngwaahịa ndị a kwatara akwata, ndị nwe ya na-eche: yabụ otu esi echekwa eyịm ka ọ ghara izere ọnwụ?
Esi esi tinye mmanu mmanu mmiri, ihe niile na-edozi ahụ
Eyịm bụ otu n'ime ndị ọrụ ubi na-ahụkarị n'anya. Na oge ọ bụla n'afọ, ọ ga-enye efere ahụ ụtọ dị ụtọ, saturate ha vitamin na ihe ndị na-achọpụta ihe. Mana iji hụ na ezigbo owuwe ihe ubi, onye bi n'oge okpomọkụ aghaghị ịma otú e si eri eyịm. Ị ma? Nri kachasị nri n'ụwa - ya bụ eyịm.
Ojiji eyịm: uru na nsogbu na ahụ ike
Yabasị - ahịhịa ndụ nke ndị ezinụlọ ya na yabasị. Ala nna nna - Southwest Asia. Otu n'ime ihe oriri a na-emekarịkarị. A na eji ya nri, ọgwụ, cosmetology. Ị ma? Ndị Ijipt oge ochie kpọrọ agịlọn "osisi nke chi dị iche iche" ma kwenye na e wuru ụwa dum ka ha bụrụ ihe atụ nke nnukwu yabasị dị ọtụtụ.
Olee otú iji mee ihe n'ụzọ dị irè na-emeso yabasị
Nrọ nke onye ọ bụla okpomọkụ bi na ubi bụ a bara ọgaranya, tọrọ ụtọ owuwe ihe ubi. Oleekwa otú ọ ga - esi wute mgbe mmebi nke ubi a kụrụ n'ubi, ịkwakasị akwụkwọ nri ma belata n 'arụ ọrụ ha, na - aga n'ihu iji nweta nrọ. Mgbe mgbe, ị ga-etinye oge na mgbalị dị ukwuu iji kpochapụ ụmụ ahụhụ na-ewe iwe site na saịtị gị, na-eji ụzọ dịgasị iche.
Chives: Calorie, mejupụtara, uru bara uru na contraindications
Ndị chives, ma ọ bụ chives, bụ ndị a ma ama dịka spagda swida - ezigbo ihe maka onye na-elekọta ubi. Ọ bara uru nke ukwuu, nwere ọtụtụ ọnụọgụ ọgwụ, na-achọ ebe ahụ n'oge okooko osisi, na-atụ ọtụtụ pests nke ubi na ogige osisi. N'isiokwu a ị ga-amụ banyere àgwà bara uru nke chives na ụdị ụdị osisi ọ bụ.
Esi na-eto eto eyịm: Atụmatụ maka ịkụ ihe ma lekọta
Atụmatụ maka esi eto eyịm, ọ bara uru maka ndị na-elekọta ubi na ndị na-elekọta ubi, ọ bụ ezie na ọ nwere ike mmasị na ndị bara uru na ndị nwere ahụmahụ. Eyịm - ihe oriri dị oké mkpa na tebụl anyị. Ọ gaghị ekwe omume iche n'echiche ụfọdụ efere na-enweghị ya. A na-eji ya eme ihe ọhụrụ, nke a mịrị amị, eji mee nri, pickles, ihe ndị a na-eme, ichebe.
Slyzun kpọọ: bara uru na ụlọ na contraindications
N'etiti ụdị eyịm nile, ebe a na-ahụkarị skezun ụta, nke a makwaara dị ka mangyre, drooping, glandular. A kwenyere na aha ya bụ isi a natara maka ịhọrọ ihe ọṅụṅụ mgbe ọ na-egbu osisi. Ha na-ekwu na ọ yiri anya mmiri. Ọ na-eto eto ọ bụghị nanị dị ka osisi a kụrụ n'ubi n'ubi ihe ubi, ma a na-ahụkwa ya n'ọhịa na ala nkume na ala ahịhịa nke Eastern na Western Siberia.
Ịhọrọ ụdị osisi yabasị kacha mma
Ịgha mkpụrụ n'ime ala, na-eto eto ma na-ewe ihe ubi n'ubi gị bụ ihe kacha atọ ụtọ. Otu nchọpụta nke usoro eto eto bara uru. Ka mkpụrụ osisi niile wee too, ọ dị gị mkpa ilekọta ha, mana ọ dị mkpa ịhọrọ mkpụrụ osisi kwesịrị ekwesị. Otu n'ime ndị mbụ ị daba n'ala bụ olulu mmiri. E nwere ọtụtụ ụdị nke ihe oriri a, ma n'okpuru bụ ihe kacha mma nke yabasị seedlings.
Mgbe na-egwu ala eyịm, nhicha eyịm site na akwa
Otutu na ogo nke ihe ubi a kpochaputara, nakwa oge ole a ga-echekwa ya, dabere na oke owuwe ihe ubi nke eyịm. Nke ahụ bụ ihe anyị ga-atụle n'isiokwu ahụ. Mgbe ewepụrụ ihe oriri na akwa Dị ka ọtụtụ akwụkwọ nri, a ga-ewepụ yabasị mgbe ọ ka zuru oke. Nanị na nke a, anyị nwere ike ịdabere na ichebe ahụ ụtọ na nchekwa ogologo oge nke akwụkwọ nri.
Ihe dị oké mkpa na nri, nakwa dịka ndị na-agwọ ọrịa, bụ ndị a na-emekarị ma kwa ụbọchị maka ihe nile nke nsị nke yabasị na garlic. Ọ bụ ya mere onye ọ bụla na-elekọta ubi ma ọ bụ ihe oriri grower jiri jiri ịnụ ọkụ n'obi na-etolite ha na nkata ha iji mee onwe ha na ndị ha hụrụ n'anya ọ bụghị nanị na nri dị mma, kamakwa na mma mara mma nke ubi ma ọ bụ ókèala - e nwekwara ụdị osisi oriri.
Otu esi enweta oke ihe ubi
Ndi oru ubi nile nke mba anyi na-eto ogwu na otu ogwu. Otu n'ime ihe ndị a kacha hụ n'anya nke osisi a bụ Exibichene eyịm. Otu esi eto eto osisi nke anyi ga - ekwu n'isiokwu a. E gosipụtara Ngosipụta na Ọdịdị Onion Onion na ókèala nke mba anyị si Holland ma bụrụ nke a na-ewu ewu n'etiti ọtụtụ ndị bi n'oge okpomọkụ.
Otu esi esi eto eto eto na Urals
Eyịm bụ otu n'ime nri ndị a na-ejikarị eme ihe na nri. Otu ihe dị mkpa na-emepụta ihe ọkụkụ a na-eme nke ọma n'ọhịa bụ ịhọrọ ụdị dị iche iche ma na-elekọta ya. Ihe kachasị mma maka Urals Nke kachasị mma nke yabasị seedlings maka Urals bụ: Arzamas -lukovitsy na-eto site na 40 ruo 80 g, nwere ọdịdị elongated-rounded, acha odo odo nke mpempe dị elu, n'ime ya dị ọcha.
Otu esi esi eto eto na ya na Siberia
Eyịm, ndị toro na mpaghara ha, ụlọ ahịa ka mma. Mana gịnị ma ọ bụrụ na ọnọdụ Siberia siri ike adịghị ekwe ka ị nweta ezigbo owuwe ihe ubi? N'isiokwu anyị, anyị ga-agwa ihe nzuzo ole na ole banyere otú e si akụ na-eto eto na ezinụlọ Siberia. Ihe kachasị mma eyịm maka Siberia A na-edepụta ụdị yabasị nke kachasị mma maka Siberia: "Strigunovsky" - nke a dịgasị iche iche na-etozi n'oge.
Òtù na-eto eto cedar elfin
Anyị na-eto eto: na-akụ ma na-elekọta "ifuru nke nkwụghachi ụgwọ"
Otu esi enweta nnukwu akuku nke cucumbers: umu kachasi nkpuru
Atụmatụ nke na-eto eto a chervil (kupyr) n'ụlọ
Njirimara bara uru na ojiji nnunu
Nke mbụ n'etiti ndị nhata - Prima apple tree
Isi ihe kpatara eggplant seedlings ada: ihe a ga-eme na nke a, esi egbochi ịda
Ntak emi ẹkedọhọde ke Chinese ẹkekere ke "mfri n̄kpa" ndien enye edi akpanikọ ke enye ikemeke ndidụk ke ufọk?